Maraykanka oo Ka Aarsaday Iiraan Kadib Weerarkii Lagu Qaaday Xurumaha Laga Maamulo….,.. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Maraykanka oo Ka Aarsaday Iiraan Kadib Weerarkii Lagu Qaaday Xurumaha Laga Maamulo….,..
Wararka ka imaanaya Maraykanka ayaa sheegaya in Khamiistii uu Maraykanku weerar ku qaaday hannaanka kombuutarradda ee dalka Iran, kaddib markii madaxweyne Trump uu ka noqday weerar dhanka cirka ah oo uu dalkaas ku qaadi lahaa.
Weerarkan dhanka kombuyuutarrada ah ayaa curyaamiyey barnaamijka laga maamulo gantaalaha riddada dheer, sida uu sheegay wargayska Washington Post.
Wargayska New York Times ayaa sidoo kale sheegaya in tallaabadaan ay ahayd aar goosi looga jawaabayey diyaaraddii aan duuliyaha lahayn ee ay Iran soo ridday, iyo weerarkii lagu qaaday maraakiibta shidaalka qaada ee Maraykanku uu Iran ku eedeeyey.
Maraykanka ayaa Iran ku soo rogay cunaqabatayn uu madaxweyne Trump ku tilmaamay “mid ba’an”.
Waxa uu sheegay in cunaqabatayntaasi ay ka hortagayso in Iran ay yeelato hub nuclear ah iyo in cadaadiska dhaqaale la sii wado doono ilaa inta xukuumadda Tehran ay wax ka baddalayso jihada ay u socoto.
Xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran ayaa sare u kacday tan iyo markii sannadkii hore uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nuclear-ka ee Iran ee 2015-kii ay la gashay dalalka ugu awoodda badan caalamka.
Toddobaadkii hore ayay xukuumadda Iran sheegtay in ay ka baxday qaar ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay ee ku saabsanaa barnaamijkeeda nuclear-ka.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in aanu doonayn in uu Iran dagaal la galo, balse waxa uu ka digay in haddii uu dagaal dhaco ay Iran “cirib tirmayso”.
Sida ilo kala duwan ay warbaahinta Maraykanka u sheegeen, weerarka ayaa la qorsheeyey dhowr toddobaad ka hor, waxaana la doonayey in jawaab looga dhigo weerarkii lagu qaaday maraakiibta shidaalka ee marayey Gacanka Cummaan.
Waxaa loogu talagalay in lagu waxyeelleeyo hannaanka hubka ee ay adeegsadaan ilaalada kacaanka Iran ee (IRGC), kuwaas oo Khamiistii soo riday diyaarad ka mid ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka.
Washington Post iyo AP ayaa labaduba sheegay in weerarkaas lagu curyaamiyey hannaanka hubka ee Iran.
New York Times ayaa sheegtay in weerarkaas loogu talo galo in waqti kooban uu System-ka Iran uu hawada ka saaro.
Wasaaradda Amniga ee Maraykanka ayaa Sabtidii Iran uga digtay in ay weerar ku soo qaaddo Kombuutarrada Maraykanka.
Iran ayaa ayaduna dhankeeda ka digtay in Maraykanku uu qaado tallaabo taas la mid ah, sida uu sheegay Wargayska Washington Post.
Maraykanka oo Ka Aarsaday Iiraan Kadib Weerarkii Lagu Qaaday Xurumaha Laga Maamulo….,.. added by admin on 23/06/2019